Musharraxa Madaxweyne ee Wadanka Mareykanka HILLARY CLINTON oo ka dhacday Is-taagga daawo - iftineducation.com
Musharraxa Madaxweyne ee Wadanka Mareykanka HILLARY CLINTON oo ka dhacday Is-taagga daawo
iftineducation.com – Musharraxa madaxweyne ee Mareykanka, Hillary Clinton, ayaa waxa ku dhacay burakiito, ama oofwareen. War qoraal ah oo la soo saaray kadib markii Clinton ay dhacday xilli ay munaasabad shacab ka qeybgaleysay ayaa arrintaasi lagu xusay.
Sawirro lagu baahiyay internetka waxa ay muujinayaan iyadoo caawiyaheeda uu kortaagan yahay.
Waxay gabadha dhaqtarka u ah ay sheegtay in Clinton ay aad u kululaatay, jirkeedana uu biyaha ka dhammaaday intii ay ka qeybgaleysay munaasabad lagu xusayay 15ka sano ee laga joogo weerarkii daarihii Mareykanka lagu qaaday.
Clinton ayaa xilli hore meesha munaasabadda ka baxday kaddib markii ay xanuunsatay. Musharraxa ay is hayaan ee Jamhuuriga, Donald Trump waxa uu kol hore soo bandhigay xaaladda caafimaadkeeda oo uu sheegay inuu liito.
Ugu dambeyn, Clark Judge, Waa waxa uu Khudbadaha u qori jiray Ronald Reagan, waxa uu sheegayaa “inay suuragal tahay in Clinton ay ka qeybgali wayso kullamo muhiim u ah, bilaha soo socda”.
raga somalida ma jeclo ineey siilka u leefaan xaasaskooda